Indlu ngaphaya kwendlela esuka e-Tramcar Bay Whangateau - I-Airbnb
Indlu ngaphaya kwendlela esuka e-Tramcar Bay Whangateau
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAlana
Le ndawo yokuhlala yanamhlanje yenzelwe ukwanelisa zonke iintlobo zee-boaties, abantu abakhangela indawo yokuphumla, ixesha labucala kunye nabo bathanda ukonwabisa. Dlulela ngaphaya kwendlela esuka eTramcar Bay, eWangateau.
Kufuphi neLeigh, iMatakana, iOmaha, iivenkile zewayini ezintle neevenkile zokutyela ezintle. Igcwele zizinto ezenziwayo ezifana nokuhambahamba okumangalisayo, iilwandle ezinentlabathi emhlophe kunye nesiqithi
sebhokhwe. Yiza nebhotile yakho yewayini ukuze uhlale phantsi uze uphumle okanye ibhodi yakho yokutyibiliza emanzini ukuze uphume emanzini uze uhambe.
Ukuqala kwindawo yokuhlala yale mihla, evulekileyo nekhitshi elikhulu elihle elivulekela kwigadi enkulu, entle nenendawo yayo yemifuno (onokuyisebenzisa!). Yindawo entle yokuphumla phandle ngaphakathi okanye udlale umdlalo we-pétanque.
Onke amagumbi okulala anefenitshala etofotofo. Igumbi lokulala elikhulu ligumbi lokuhlambela elitsha, indawo eqaqambileyo nenemfihlo. Amanye amagumbi okulala ayi-2 kunye nendawo enye esetyenziswa ngumntu wonke enesofa esongwayo kwibhedi etofotofo.
Igumbi lokuhlambela eliyi-1 elinento yonke, elineshawa enkulu (uxinzelelo olukhulu) kunye newardrobe enkulu kunye nendawo yokugcina izinto kulo lonke ikhaya.
Ifudumele kwaye itofotofo ebusika ngempompo efudumeleyo kunye nendawo yokubasa kunye nendawo entle yokwamkela iindwendwe ehlotyeni ebudeni beenyanga ezifudumeleyo.
Icandelo elibiyelweyo ngokupheleleyo lenja eyi-1 ngokuhlala ngakunye, nangona iyadi engasemva ibuyela kwindawo engabonakaliyo. nceda uqhagamshelane nam ukuze nincokole.
Indlu ayinawo umsi, ikude ngeemitha eziyi-2 ukusuka endlwini ngalo lonke ixesha.
Azivumelekanga iipati, ingxolo enkulu inqunyanyisiwe ngo-10pm ngokuphathelele ummelwane othi cwaka.
Ukusuka emanzini ukuya kufutshane nazo zonke izinto ozifunayo njengeevenkile zokutyela ezintle/iibhari, izinto onokuzenza kunye nabantwana, iimarike ezidumileyo zangoMgqibelo zaseMatakana kunye nezinye izinto ezininzi onokuzibona.
Umbuki zindwendwe ngu- Alana
I live in Auckland with my husband Chris and our children and 2 dogs. We love the Matakana area and all it has to offer us from the amazing eateries, wineries and the stunning loc…
Ifumaneka 24/7 ngexesha lokuhlala kwakho.